Waa sidee xaalada Superstar Mithun Chakraborty oo suuqa loo galiyay inuu geeriyooday? – Filimside.net
Waa sidee xaalada Superstar Mithun Chakraborty oo suuqa loo galiyay inuu geeriyooday?
Superstar Mithun Chakraborty dhawaanahan wuu xanuunsanaa sidoo kalena saaxada filim jilista laguma arkin waxaana ugu dambeesay filimkii Genius oo soo baxay 24 Aug 2018 asigoo muuqaal caawiye kooban ku lahaa waxaana hogaamiye ka ahaa filimkan wiilka fanka ku cusub Utkarsh Sharma.
Sidoo kale Superstar Mithun Chakraborty waxaa laga waayay bandhig faneedyada uu dhex dhexaadiya ka ahaan jiray ee TV-yada laga daawado asigoo xanuunsaday hawlihii lagu yaqiinayna qabsan waayay.
Dhawaan magaalada Los Angles ee dalka Mareekanka ayaa Mithun loo qaaday si loola tacaalo xanuuno kala duwan oo lasoo darseen Superstar-kan balse waxaa suuqa loo galiyay inuu geeriyooday!
Mithun Dada xaaskiisa Yogita Bali ayaa warbaahinta u sheegtay in seygeeda xaalad soo kabasho aad u wanaagsan ku jiro dhawaana uu dib ugu soo laaban doono gudaha Hindiya waxaana qaliin looga sameeyay dhanka dhabarka sidoo kalena xanuuno isaga u gaar ah oo aan saxaafada lala wadaagay ayaa laga daaweeyay.
Mithun xanuunka dhabarka ee ka hari weesan kuna qasabay inuu qaliin galo wuxuu soo gaaray 10-sano ka hor mar uu duubayay filimka Lucky oo ay la jileen Sanjay Dutt, Imran Khan, Shruti Haasan, Danny iyo jilaayaal kale marar kala duwan ayaa dhabarka laga daaweeyay balse xanuunka wuu ka hari waayay ilaa uu gaarsiiyay inuusan socod dheer gali karin, wax badan taagnaan karin ama fadhi badan uusan sameyn.
Mithun xaaskiisa Yogita Bali waxay sheegtay in caafimaadka seygeeda muhiim yahay marka kowaad gudaha Hindiya lagu soo celiyo horey shaqo ka gali doonin ilaa 100% uu kasoo kagto fasaxna uu ka helo dhaqaatiirtiisa gaarka ah inuu shaqada filim jilista kusoo laaban karo 66-jirkan.